सडक कला, क्यानहरूमा लेखिएका सकरात्मक सन्देशहरू क्रिएटिव अनलाइन
सडक कला, क्यान्ड सन्देशहरू
जुडित मर्सिया | | धेरै
यो पोष्टमा कसले सन्देश छोड्दैन? जीवनको कुनै कुनै बिन्दुमा हामी सबैले फ्रिजमा झुण्ड्न एउटा सानो नोट लेखेका थियौं, छोटो व्हाट्सएप तर आइकनहरू भरिएको, कसैलाई छक्क पार्ने छोटो वाक्यांश ... विवरण जुन चाँडै हड्ताल गर्दछ जसले यसलाई प्राप्त गर्दछ, र हामीलाई सन्देश पठाउने व्यक्तिलाई, यसले हामीलाई राम्रो सागर महसुस गराउँदछ।
धेरै अन्य पटक हामी हो सन्देशहरु को प्राप्तकर्ताहरु, बाथरूम भित्ताहरु मा लेखिएको वाक्यांशहरु, शहर को पर्खालहरु, सार्वजनिक टेबल वा कुर्सी।
1 कला परियोजना ME Lata
2 दुई प्रेमीहरू
3 क्यानहरूमा तपाईंको सन्देशहरू
4 सामाजिक नेटवर्क
5 आफ्नो काम को प्रदर्शनी
कला परियोजना ME Lata
पहिले नै चार बर्ष, बार्सिलोनाका एक जोडी जो रावलमा बस्छन् (यस शहरको एउटा छिमेकी), शुरू भयो सन्देश छोड्नुहोस्। तिनीहरूले यो गरे धेरै मौलिक तरीका: क्यानहरूमा लेखिएको प्रेम नोटहरू। उनीहरूले हामीलाई बुझाउँछन् कि उनीहरूको छिमेक जताततै खाली क्यानले भरिएको थियो, र तिनीहरूले यस स्रोतको फाइदा उठाए, यदि तिनीहरू ज place्गल जस्तो अर्को ठाउँमा बसिरहेको भए, तिनीहरूले नरिवल चित्रित गर्थे। तिनीहरूले रावललाई सकारात्मक सन्देशहरूले भरिदिए, गीतको गीत, कविता र लोकप्रिय भनाइहरू।
यस परियोजना को नाम संग बप्तिस्मा गरिएको छ म सक्छु। तिनीहरू केवल बार्सिलोना भर्ने मा सीमित छैन, तिनीहरू विस्तार भइरहेको छ Gिरोना, मल्लोर्का, पेरिस र लन्डन जस्ता अन्य क्षेत्रहरूको लागि। थप रूपमा, तिनीहरू आश्वासन दिन्छन् कि उनीहरूसँग नक्कलहरू छन्, किनकि यदि तपाईं मोन्टपेलर वा टेल-अवीवमा क्यानहरूमा सन्देशहरू देख्नुहुन्छ भने तिनीहरू तिनीहरूको होइनन्।
यो जोडी मानिदैन न त कलाकार नै न ग्राफिटी, ठूला अक्षरहरूमा "दुई LOVERS" को रूपमा परिभाषित छन्। तिनीहरू सकारात्मक सन्देश मार्फत उनीहरूको बिट योगदान दिएर यस संसारलाई राम्रो ठाउँ बनाउन चाहान्छन्। त्यो पुष्टि गर्नुहोस् "यो एक उपाध्यक्ष हो, यो एक लत खेल हो, एकचोटि तपाईंले सुरु गर्नुभयो तपाईं रोक्न सक्नुहुन्न".
यसको स्रोतहरू समर्थनका सर्तहरूमा पूर्ण रीसायकल गरियो। तिनीहरू सबै प्रकारको डब्बा प्रयोग गर्दछ: कुराकानीमा क्यान, स्प्रे, पेय, कुनै पनि प्रकारको धातुले वा कन्टेनर क्यानभासमा परिणत हुन्छ।
क्यानहरूमा तपाईंको सन्देशहरू
उनीहरू के लेख्छन्? सकारात्मक, सुन्दर सन्देश जसले प्रेम जगाउँदछ। हामी तपाईंलाई उसको केही वाक्यांशहरूको सूचीमा राख्छौं।
सबै भन्दा पहिले कुनै कुरा भन्दा पहिले प्रेम गर्नुहोस्।
कुनै टिन्क पोर डे सोमियार छैन - जसको अर्थ "म सपना देख्न डराउँदिन।"
टिभी बन्द गर्नुहोस्, तपाईंको ट्रान्जिस्टर खोल्नुहोस्, र तपाईंको खुट्टामा गुदगुदी महसुस गर्नुहोस्।
म तपाईसँग नजिक हुन चाहान्छु।
उनी महान नायक हुन्।
न त देश हो न झण्डा, हामी आफ्नो तरिकामा बाँचिरहेका छौं।
मलाई धेरै चुम्बन।
तिमीलाई कत्ति माया गर्छु भनेर माया गर्छु।
चुम्बनले सबै कुरा निको पार्छ।
entre सडकमा बनाइएका र पोष्ट गरिएका अन्य धेरै सन्देशहरू.
हामी तिनीहरूलाई सडकमा संयोग वा धेरै सजिलो तरिकामा सामाजिक नेटवर्कहरू मार्फत फेला पार्न सक्छौं। तिनीहरूसँग एउटा छ इन्स्टाग्राम खाता जहाँ तपाईं तिनीहरूको परियोजनाहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई तिनीहरूको कार्यहरूको प्रक्रिया देखाउनुहोस् र अवश्य पनि, अन्तिम परिणाम। यो एक खाता हो जुन प्रेरणाको स्रोतको रूपमा सेवा गर्न सक्छ।
केहि हेरौं तपाईंको प्रकाशनहरू:
आफ्नो काम को प्रदर्शनी
यद्यपि उनका कार्यहरू बार्सिलोना शहरमा फेला पार्न सकिन्छ, तिनीहरू सारिएका छन् र एउटा कला ग्यालरीमा स्थापित छन्। विशेष रूपमा आर्टेविस्टास ग्यालेरी। यो स्थानले तिनका pieces० भन्दा बढी टुक्राहरू होस्ट गर्नेछ। प्रदर्शनीको शीर्षक छ "कसरी म तपाईंलाई फेरि माया गर्छु भनेर भन्दछु" र नोभेम्बर २ 50 देखि जनवरी from सम्म खुला रहनेछ।
La उद्घाटन नोभेम्बर २ on मा हुनेछ बेलुका 19 देखि १० सम्म। यदि तपाइँ प्रदर्शनीको बारेमा अधिक जानकारी जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाई ग्यालरीको वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। मेरो लाटा आश्वासन दिन्छ कि तिनीहरू वास्तवमै यस बारे उत्साहित छन् ग्यालरीमा प्रदर्शन गर्न सक्षम भएर प्रस्ताव गरिएको। यो नोट गरिनु पर्छ कि उनीहरूले यो पहिलो पटक गर्छन्, र कुनै श doubt्का बिना, यसले उनीहरूलाई अधिक दृश्यता र व्यावसायिकता दिन्छ। तिनीहरू दावी गर्दछन् कि जब तपाईं ग्यालरीमा प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, तिनीहरू के गर्न सुरु हुन्छ आफूलाई कला सम्झनुहोस् र यो भावना वास्तवमै सन्तोषजनक छ।
ग्यालेरी आर्टेविस्टास ग्यालेरी मा बार्सिलोना मा स्थित छ, मा Passatge del Crèdit सडक,।। यसको फाइदा लिनुहोस् अवसरकिनभने बन्द स्थान भएकोले यी कलाकारहरूलाई अर्को प्रकारका कामहरू सिर्जना गर्न स्वतन्त्रता दिन्छ, अन्य सुविधाहरूसँग जुन यो विरोधाभासी जस्तो देखिन्छ, सडकको अवस्थाले तिनीहरूलाई बाहिर जान अनुमति दिदैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » सडक कला, क्यान्ड सन्देशहरू
यो क्षणको सबैभन्दा प्रख्यात अनुप्रयोगहरूको s० को ग्याजेटहरू हुनेछन्
माइक्रोसफ्ट एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिर्जना गर्दछ जुन तपाईंको अनुहारको caricatures बनाउँछ